आर्थिक – Page2– Fewa Times
नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य यस्ताे
काठमाडौं- नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला ९१ हजार १०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यो बुधबारकै मूल्य हो । सुनको मूल्यमा उतार चढाव आउने क्रम निरन्तर छ । यस्तै आज चाँदी ९३५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै,आज तेजाबी सुनको मूल्य ९० हजार ६ सय ६५ रुपैयाँमा......
फेरि बढ्यो सुन चाँदीको मूल्य, कति पुग्यो तोलामा ?
सुन चाँदीको भाउ आज बुधबार फेरि बढेको छ । छापावाला सुनको भाउ आज तोलामा ५ सय रुपैयाँले बढेर ९१ हजार एक सय पुगेको हो । तेजावी सुन पनि आज तोलामा ५ सय रुपैयाँले बढेर ९० हजार ६६५ रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आज प्रति १० ग्राम छापावाला सुनको भाउ ७८ हजार १०५ रुपैयाँ, प्रति १० ग्राम तेजावी......
लगातार बढेको सुनकाे मूल्य एक्कासी घट्याे ! कति पुग्यो तोलामा ?
असार ९,काठमाडौं- नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज सामान्य घटेको छ । सोमबार प्रतितोला ९१ हजारमा कारोबार भएको सुन आज भने ४ सयले घट्दै ९० हजार ६ सयमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार आज चाँदीको मूल्य पनि १० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ९४० मा कारोबार भइरहेको छ ।......
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य अहिले सम्मकै उच्च, कति पुग्यो तोलामा ?
असार ८,काठमाडौं - नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज पनि बढेको छ । आज सुन अहिले सम्मकै उच्च मूल्यमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला ९१ हजारमा कारोबार भइरहेको छ । आइतबार प्रतितोला ९० हजार ६ सयमा कारोबार भएको थियो । आज चाँदी पनि १० रुपैयाँ बढेर......
आइतबार फेरि बढ्यो सुनकाे मूल्य,कति पुग्यो तोलामा ?
असार ७,काठमाडौँ- नेपाली बजारमा आइतबार सुन–चाँदीको मूल्य बढेको छ । आज छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला ७ सय रुपैयाँले बढेर ९० हजार ६०० रुपैयाँ पुगेको छ । गत शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला ८९ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारि दिएको छ । यस्तै, तेजावी सुनको मूल्य......
सुनको मूल्य अहिले सम्मकै उच्च, कति पुग्यो तोलामा ?
काठमाडौं- नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज अहिले सम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । सुन आज प्रतितोला ८९ हजार ९०० रुपैंयाँमा कारोबार भइरहेको छ । सुन आज प्रतितोला १ सय रुपैयाँ बढेको हो । आइतबार सुन प्रतितोला ८९ हजार ६ सय रुपैंयाँमा कारोबार भएको थियो । गतहप्ता विहिबार र शुक्रबार पनि यहि मूल्यमा कारोबार भएको......
हेर्नुहोस्, आज सुनचाँदीको मुल्य घट्यो कि बढ्यो
काठमाडौं – नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज स्थिर छ । सुन आज प्रतितोला ८९ हजार ८०० रुपैंयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यो बुधबारकै मूल्य हो । सुनको मूल्य अहिले सम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो । आइतबार सुन प्रतितोला ८९ हजार ६ सय रुपैंयाँमा कारोबार भएको थियो । गतहप्ता विहिबार र शुक्रबार पनि यहि मूल्यमा कारोबार......